Gera MxM မှ 30 စာပိုဒ်တိုများ ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
သင်မက္ကဆီကိုဂီတကိုနှစ်သက်လျှင် Gera Mxm ကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ သူသည်လက်ရှိတွင် Gera MX အဖြစ်လူသိများသည်။ သူသည်မက္ကဆီကိုတွင်မွေးဖွားခဲ့သောတေးရေးဆရာနှင့်ရက်ပ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ Sသူ၏အမည်ရင်းမှာ Gerardo Daniel Torres Montante ဖြစ်သည်။ သူ၏လူမျိုးသည်မက္ကဆီကန်ဖြစ်သော်လည်းသူ၏သီချင်းများသည်နယ်နိမိတ်ကိုချိုးဖျက်ကာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးသို့ရောက်သည်။ သူ၏ပထမဆုံးအယ်လ်ဘမ်ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်“ Precipicio” ဟုခေါ်တွင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် No Veo No Siento ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။
သူ၏ YouTube တွင်သူ၏ဗွီဒီယိုများသည်သန်းပေါင်းများစွာသောအမြင်များကိုရရှိခဲ့ပြီးသူ၏နောက်လိုက်များအကြားတွင်များစွာအောင်မြင်ခဲ့သည်။ သူ၌မိသားစုနှင့်ကျောင်းပြproblemsနာများရှိသော်လည်း စာဖတ်တတ်လာသည်နှင့်အမျှစာလုံးများကိုအရသာစတင်ခံစားလာသည်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကသူတို့ကိုကြိုက်မှာသေချာတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဘာကြောင့်ဒီလောက်အောင်မြင်ရတာလဲဆိုတာကိုသိချင်ရင်သင်ဟာသူတို့နှစ်သက်တဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုနားထောင်ချင်လို့ပါ။ Rap ကိုကြိုက်ရင်သင်ကြိုက်မှာပါ။
cupid မယုံပါနဲ့, သူသာမြှားပစ်။
အချိန်ကိုဖျက်ပစ်ပါ၊ ငါ့ကိုသတိရစေတဲ့အရာအားလုံး၊ မင်းရဲ့ဓာတ်ပုံတွေ၊ မင်းရေးခဲ့တဲ့အက္ခရာတွေကိုလွှင့်ပစ်ပါ။ သင့်ရဲ့အင်္ကျီကြီးတွေ၊ စျေးကြီးတဲ့နားကပ်တွေလိုသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပွဲလုပ်တာနဲ့မလုံလောက်ဘူး။
ကျွန်တော့်သီချင်းစာသားကဝါယာကြိုးပေါ်ကမီးခိုးကြောင့်ကခုန်တာပါ။ မနေ့ကအဖွားကိုဘယ်တော့မှနောက်ကျတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကတိပေးခဲ့တယ်။ အခုသူတို့စိတ်အေးအေးထားဖို့ကျွန်တော့်ကိုတောင်းပန်တာ၊ ငါစင်မြင့်ပေါ်တက်တဲ့အခါငါမအောင်မြင်တာတွေကိုချီးကျူးလိုက်တာဘယ်လောက်ရယ်စရာကောင်းလိုက်သလဲ။
ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နေရာမှာငါတို့ပျောက်ဆုံးသွားပြီ၊ ဆန္ဒ၊ နမ်းခြင်းများနှင့်ငါတို့ရှိခဲ့သမျှကိုပြောပြပါ။ ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာအိပ်ကြမလဲ။ ငါနောက်လိုင်းဆွဲမယ်၊ မင်းကိုနာကျင်မှုနဲ့ဆိုငါနာတယ်၊
ငါဆိုသည့်သီချင်းမှာကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရာ၊ ကျွန်ုပ်နေထိုင်ခဲ့ရာနှင့်ပြောင်းလဲရန်မလိုပါ။ ဒါကငါကစောင့်ရှောက်ဖို့ရည်ရွယ်ပုံဖြစ်တယ်, သူကလူကိုမပြောင်းလဲဘူး, ငါ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့မပြောင်းလဲပါဘူးငါစီမံခန့်ခွဲခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါနေရောင်အောက်မှာနေရောင်ခြည်သိပ်မများတဲ့၊ နိမ့်ကျတဲ့ကမ္ဘာကနေလာတာ။ မိန်းကလေးငိုတယ်၊ သူ့အမေကအဆောက်အအုံကနေအသနားခံတယ်။ သားအတွက်မကောင်းတဲ့အကြွေးတွေကြောင့်အချိန်ရောက်လာပြီ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနားလည်ရန်နှင့်နားလည်ရန်ခဲယဉ်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အလိုအပ်ဆုံးသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးယနေ့တွင်မြို့သည်အိပ်ပျော်ခြင်းမရှိသေးပါ။
သူတို့အားညများအတွက်ရွှင်လန်းခြင်း, ကောင်းသောအချိန်, ကျောင်းအတွက်သူတို့ကငါ့ကိုပေးခဲ့တာ၊ ငါနင့်ကိုလိမ်နေတဲ့နံနက်ခင်းတွေအတွက်ကျန်ခဲ့တဲ့အနမ်းတွေ၊ အမြဲတမ်းပြုံးနေပြီးဘယ်တော့မှပုံသက်သေကောင်းမပြရ
လက်မှတ်တွေ၊ codeine နဲ့စက်သေနတ်တွေအကြောင်းပြောတာနဲ့နောက်လိုက်တွေနဲ့ Boobs Signing ဓာတ်ပုံတွေဝါကြွားနေတယ်။ False! သူတို့ဘိနပ်မပါသောလမ်းမလျှောက်ခဲ့ကြပါ။ စီးပွားရေးနှင့်ချေမှုန်းရေးဖိအားများနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့ဘာတွေသိရမလဲ။
မင်းကမာရီယိုကစားတဲ့အချိန်ထက်ပိုပြီးငါတို့ဒင်္ဂါးတွေပိုစုဆောင်းတယ်။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုခက်ခဲတဲ့သူလို့ငါသိတယ်၊ ငါဟာအမြဲတမ်းစစ်သူရဲတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်၊ ငါလိမ်တာတောင်မနက်စာအတွက်စားစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။
ငါမင်းကိုငါပေးနိုင်သမျှကိုငါပေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါမလုံလောက်ဘူး၊ မင်းကိုငါဘယ်တော့မှမရောက်ရှိနိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒါဟာမုန်းတီးမှုကနေချစ်ခြင်းမေတ္တာအထိချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရပ်တန့်စေတဲ့ကြယ်တစ်ပွင့်ပါ။ - »မင်းကိုငါဘယ်တော့မှရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး
သူတို့ကကျွန်မကိုဆေးလိပ်သောက်တယ်ဆိုရင်ငါဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ ငါဒေတာကိုသာဖြတ်သန်းလိုက်သည်၊ သို့မှသာသူတို့ထွက်ထွက်သွားနိုင်မည်၊ ခဏသာဖွင့်နိုင်သည်။ - »မီးခိုးခေါ်ဆို
ကျွန်ုပ်၏ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်ုပ်၏နှလုံးသား၌သာမကမှတ်ဉာဏ်ထဲ၌ပါအဆုံးသတ်မပြောနိုင်ပါ။ ငါအချိန်ရောက်လာသောအခါ, ငါ့ခြေကိုအရင်ကဲ့သို့မြေပေါ်မှာအဘို့ငါသတိရပါ။ - »သူတို့ကငါတို့ကိုသိပ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်။
Distant ကချစ်တယ်။ ဒါကငါဒရာမာကိုမကြိုက်ဘူး။ ဒါပေမယ့်အရာရာတိုင်းကုစားမယ်ဆိုရင်ကောင်းမွန်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေအဆုံးသတ်သွားတယ်။ ငါထွက်ခွာခဲ့ရတယ်၊ ငါ့အတ္တကငါ့ကိုအေးခဲစေပေမဲ့တကယ်နာကျင်တဲ့အခါဝမ်းနည်းစရာစာသားတွေသာရေးခဲ့တယ်။
အောင်မြင်မှုကိုသင်ရရှိသည်၊ သင် ၀ ယ်ပါကဘယ်သောအခါမျှတန်ဖိုးမရှိပါ။
ငါကပြီးပြည့်စုံခြင်းထက်ပိုသင်ယူခဲ့တယ်၊ ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုရဲ့အမြင့်ဆုံးအထိဖိအားနဲ့ပြိုင်ပွဲစတဲ့အခါအရာရာတိုင်းဟာလှပနေပုံရတယ်၊ ပြီးတော့သင်အရမ်းမြင့်မားလာတာနဲ့အမျှအရာအားလုံးကျဆုံးသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်။
အိပ်ယာပေါ်မှာလဲလျောင်းနေတုန်းမီးခိုးကငါ့ကိုခေါ်နေတယ်၊ ​​ငါ့ကိုမချစ်ဘူး၊ ဆေးလိပ်သောက်တာပိုကောင်းတယ်၊ ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ပြီးငါ့ဝိညာဉ်ကိုကျန်းမာအောင်ထားခြင်းကဆံပင်မဖြည်မချင်းငါ့ကိုငါလောင်နေသည်ကိုသင်မြင်ရလိမ့်မည်။
မင်းရဲ့ဓာတ်ပုံတွေဟာအမှတ်တရတွေ၊ မင်းရဲ့စာတွေဟာစာရွက်တွေဖြစ်တယ်၊ ငါကပန်းခြံထဲမှာကြက်တစ်ကောင်လို။
လွမ်းဆွတ်မှုရောက်နေသည့်တစ်ဝက်ပိုင်းတွင်ချောက်ကမ်းပါးအစွန်းတွင်အရာအားလုံးပြတ်တောက်သွားသည်ကိုမြင်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည်မျက်စိကန်းသောဝိညာဉ်ဖြင့်အသက်ရှင်နေသည်ဟုမခံစားရပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလေ့လာပါ၊ ကလေးငယ်များမကစားပါ။
ဤလက်များတွင်ရှိသောစက်ဘီးသည်အဆင်တန်ဆာတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်အဝေးပြေးလမ်းသို့ပြန်လှည့ ်၍ ပြန်လှည့်လာခြင်းမရှိပါ။ သူတို့ကငါကတက်ပြီဖြစ်ကြောင်းကိုပေမယ့်ငါကျေနပ်မှုမရ။ ရပ်ကွက်ကကျွန်တော့်ကိုဖန်တီးပေးခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါအဲဒီလိုလုပ်တယ်။
Boom! သူတို့ကကောင်းကင်ကိုခဲတွေနဲ့ပစ်ပေါက်နေကြတယ်။ ငါဟာငါ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားလုံးထဲကနေသေချင်ပေမယ့်မနာလိုမှုမှမဟုတ်။ အပြင်မှာသူတို့တစ်ခုခုမှတ်ချက်ပေးတယ်။ မနာလိုမှုကမင်းကိုသတ်မယ်ဆိုရင်မင်းဟာသေလွန်သူတွေကိုသေစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲ။
ယနေ့ညမှာသင်ဆေးလိပ်သောက်တာနဲ့တူတယ်။ အရူးတွေရောက်လာကြတယ်။ သူတို့ဟာ chelas နဲ့သွားကြတယ်။ ငါ့ကိုဘာမှအရေးမကြီးဘူး။
ခင်ဗျားတကယ်အနုပညာရှင်လား။ ပိုမိုရိုးရှင်းသည့်အရာ၊ ငွေ၊ အင်တာဗျူးများ၊ မဂ္ဂဇင်းများသို့မဟုတ်စာရင်းထဲတွင်ပါ ၀ င်သည့် on ည့်သည်များမရှိသလောက်ပင်။ ကောင်းသောလမ်းများကိုနားထောင်သောဘီယာနှင့်သူငယ်ချင်းများသာဖြစ်သည်။
သူစတင်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်ယောက်ကတော့ငါ့ကိုဖမ်းစားခဲ့တယ် အဲဒါငါ့အမှားမဟုတ်ဘူး၊ ငါ့နှလုံးသားအမှားပါ။ ငါအပြစ်ရှိတယ်၊ ငါ့ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘူး၊ ခွင့်လွှတ်မှုတောင်းခံဖို့လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်။ ငါသူတို့ကိုငါနှစ် ဦး စလုံးရှိသည်နိုင်ဘူးမသိခဲ့ပါ။
ငါရက်ပ်ကစားနေတယ်လို့အမေထင်နေတုန်းပဲ၊ ငါကရက်ပ်မကျင့်ခဲ့ပေမယ့်သဘာဝအားဖြင့်စာသားဆရာတစ် ဦး ဟာတစ်နာရီ ၁၀၀ နှုန်းမောင်းနှင်တာကိုမကျေနပ်နိုင်ဘူး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » Gera MxM အားဖြင့် 30 စာပိုဒ်တိုများ